Trump oo dalbaday in la dilo ninka lagu tuhunsan yahay weerarkii New York - BBC News Somali
Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku celiyay baaqa ah in la dilo ninka looga shakisan yahay weerarkii New York, kaas oo siddeed qof ay ku dhinteen.
Mr Trump ayaa ka noqday hadal uu horay u yiri oo ahaa in Sayfullo Saipov loo diro xabsiga Guantanamo Bay, oo uu sheegay "in hannaan dheer ay tahay."
Ninka laga shakisan yahay ayaa gaari ku jiirsiiyay dad ku socday marin baaskiillada loogu talagalay ee ku taalla deegaanka Manhattan, wuxuuna booliska u sheegay "in uu ku faraxsan yahay sida uu u fuliyay weerarkii Talaadadii."
Markaa ka dib, ururka la baxay dowladda Islaamka ayaa sheegatay in ninkaa uu ka tirsanaa kooxda.
Ninka weerarka qaaday "wuxuu ka tirsanaa askarta Khilaafada", ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay IS, balse maysan bixin cadeyn ay ku xaqiijinayaan sheegashadooda.
Dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa shan qof oo Argentina u dhashay oo saaxiibo ahayd in ka badan 30 sano oo dabaaldeg u tagay New York. Haweeney Belgium u dhalatay iyo laba qof oo Mareykan ah ayaa sidoo kale lagu dilay weerarka.
Saipov oo 29 sano jir ah, wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Uzbekistan, waxaa dhaawacay booliska. Baarayaasha waxay sheegayaan in ninkan uu cadeeyay in IS uu dhiiragelin ka helay"
Hadalka Trump khatar miyuu ku yahay cadaaladda?
Mr Saipov, oo Arbacadii maxkamad la horgeeyay isagoo gaari lagu riixayo ayaa lagu oogay dacwad argagixisanimo, taas oo sababi karto in maxkamadda ay meesha ka saarto ciqaabta dilka si ninkan loogu qaado.
"Sidoo kale waxaa jiro arrin ku haboon oo ah in lagu hayo guriga u dhigma dembiga xun ee uu geystay," ayuu yiri madaxweyne Trump oo shaqi ahaan ka soo jeedo magaalada New York.
Isagoo ku celinayay hadalkiisii hore, Trump wuxuu yiri Saipov "Waa in si degdeg ah dil loogu xukumaa!"
Sikastaba, dadka arrimaha sharciga difaaca ayaa soo jeediyay in hadalka Mr Trump ay tahay in loo arko mid halis ku ah dacwadda.
Arrintan oo kale horey ma loo arkay?
Waa la yaab in madaxda Mareykanka in ay taageeraan kiisas dembi oo weli maxkamad ay dhageysaneyso, balse horey ayaa loo maqlay arrintan oo kale.
Image caption Mr Saipov, oo maxkamad la geeyay
Sanadkii 1970-kii, qareenadii u doodayay nin dad badan dilay, Charles Manson, ayaa racfaan qaatay ka dib markii madaxweynihii xilligaa Richard Nixon uu ku dhawaaqay in ninkaa uu dembiile yahay, ayadoo kiiskii maxkamadda la geeyay uu weli socday.
Nixon ayaa hadalkaa ka noqday, garsoorihii maxkamadda ayaana amray in dhageysiga dacwadda la sii wado.
Madaxweyne Trump ayaa dhankiisa, horay u soo jeediyay in dadka dembiyada waawayn geysta lagu xukumo dil.
Sanadkii 1989-kii, shan qof oo madow iyo Latino isugu jiray ayaa lagu eedeeyay dembi xun oo kufsi in ay ka geysteen New York. Xilligaa, Mr Trump wuxuu $85,000 oo dollar ku bixiyay cinwaan wargeys lagu qoray oo ahaa "waa in la soo celiyo xukunka dilka!"
Shantaasi nin waxaa lagu waayay dembi ka dib tijaabo lagu sameeyay dhiigooda hida-sidaha, waana la sii daayay.
Dacwadda lagu oogay Saipov
Image caption Sawirka Sayfullo Saipov w
Image caption Shan nin oo muddo saaxiibo ahaa ayaa ka mid ah kuwa ku dhintay weerarkii New Yor
Sawirro Sawirrada weerarka New York